ခဈြရသော မောငျ – My Blog
ရနျကုနျ ဆေးတက်ကသိုလျ တတျရတော့မယျဆိုတော့ အိမျကလညျးကြှနျမကို တရုတျတနျးမှာ တိုကျခနျးဝယျပေးပွီး သူတို့ခဈြသမီး လေးကိုကြောငျးထားးပေးခဲ့တယျ ရှမျတရုတျမလေး ကြှနျမ က ဖွူစှပျတဲ့အသားအရေ နဲ့ . ပွပွေဈတဲ့ခန်တာကိုယျအခြိုးအစဈ လေးရှိ နတေယျလေ ရငျ၃၆ ခါး၂၁ နဲ့ တငျ ၃၈ ဆိုတော့လုံးကွီးပေါကျလှလို့ပဲပွောရမလား ကိုယျဟာကိုဂုဏျဖျောတာတော့မဟုတျပမေဲ့ ပွောရဦးမယျ မိဘတှရေဲ့အုပျထိနျးမူမှာနခေဲ့ ရတဲ့ကြှနျမလေ လိငျကိစ်စမပွောနဲ့ အခဈြဆိုတာတောငျဘာမှနျးမသိခဲ့တဲ့အပြိုစဈလေး ပေါ့ ဒါပမေဲ့အရှယျလေးရလာတော့ တဈဖကျလိငျကို စိတျဝငျစားလာတတျပွီပေါ့ ဒီလိုနဲ့ facebook သုံးရငျး စကားပွောကောငျးတဲ့ မောငျ နဲ့ online ခဈြသူတှဖွေဈခဲ့ယျ Online ပျေါမှာတော့ မောငျဟာလူလိမျမာလေးပါ
အခဈြကွောငျးကိုမိတျဆကျပေးခဲ့ပမေဲ့ လိငျအကွောငျးတော့တဈခါမှာမဟခဲ့သူပါ တဈနတေ့ော့ မောငျကအပွငျမှာဆုံရအောငျတဲ့ အို ကြှနျမလေ မောငျနဲ့တှဖေို့ ရငျတှခေုနျလိုကျတာ ညတောငျတေျောတျောနဲ့အိပျမပြျောဘူး မနကျနိုးလာတေော့ ကှနျမ ကိုယျ ကြှနျမအလှဆုံးပွငျနမေိတယျ ဒီစကတျလေးနဲ့ဆို အရမျးမြားတိုနမေလား အိုမသိတော့ပါဘူး ဘလာစီရာအနီရဲရဲလေး ကို ဂုတျက နကြွေိုးတိုငျးလိုကျတယျ ပငျတီနီနီလေးက ကြှနျမရဲ့ ရှကျရှကျကြု လုံအောငျမဖုံးနိုငျပဲ အသားဆိုငျလေးတှအေဈထနတေယျ ပွီး တော့ ကွိုးတဈခြောငျး အကြီင်္ီ အဖွူလေး အပျေါကဝတျလိုကျတယျ အကြီင်္ီ အဖွူအောကျမှာကြှနျမ ရဲ့ဘလာစီယာနီနီလေေးထ ငျးနေမှောသေခြောတယျ မီနီစကကျလေးဝတျလိုကျတယျ
ဆံပငျဖွောငျ့ဖွောငျးစငျးစငျးတှကေို ပိုနီတေးစီး ပွီး အိုငျလိုငျနာထူထူလေးခယျြသလိုကျတယျ နှုတျခမျးလေးကို အနီရဲရဲလေး ဆိုး ရငျးမှနျထဲက ကိုယျ့ပုံကိုကွညျ့ပွီးကနြေပျသှားတယျ ဟူးရငျတှခေုနျလိုကျတာ တိုကျအောကျဆငျးလာတဲ့ ကြှနျမကို သူကွညျ့နေ တာလေ ရငျတှေ တငျတှနေားမှာရဈသီရဈသီပေါ့ ကြှနျမသိသားပဲ လကျကိုလာကိုငျတဲ့ သူ့လကျတှကေလညျးအေးစကျနတေယျ ကြှနျမလကျကိုဆှဲပွီးသူ့ကားပျေါ ချေါသှားတယျ ကားတာလြှောကျမောငျးနတော ကြှနျမတို့ခုထိဘယျကိုဦးတညျရမှနျးမသိ ဒါနဲ့ပဲ ကနျတျောကွီး ထဲရောကျလာကွတယျ သူကကြှနျမကွညျ့နတောမြားအို ကြှနျမမကျြနှာတောငျမထားတကျဘူး ၇ငျတှကေလညျးခုနျ လိုကျတာ အကငြ်္ီဖွူဖွူအောကျကနေ လှုပရှားနမှောသခြောတယျ ကားပျေါမှာထိုငျရငျး သူ့ပေါငျကိုခေါငျးအုနျးရငျးအိပျမလား ဆို တော့ ကြှနျမခေါငျးငွိမျ့ပွီး ပေါငျပျေါခေါငျးလေးအုနျးလိုကျမိတယျ
လူလိမျမာလေးလို့ထငျထားတဲ့ကြှနျမ မှားမှနျးသိလိုကျရတယျ ဘာလို့လညျးဆိုတော့ သူမကျြနှာကကြှနျမ. မကျြနှာပျေါ အုပျမိုးကြ လာပွီးကြှနျမနှုတျခမျးရဲရဲလေးကိုအတငျးစုပျယူ နမျးခံလိုကျရတယျ အိုတဈခါးမှမနမျးဖူးဆဲ့ကြှနျမ နှုတျခမျးလေးကို ပကျြတော့ တတျစုပျရငျးသူ့လြာတှကေ အတငျးကြှနျမလြာကိုရဈပတျနတေယျ ရငျထဲမှာဘယျလို ကွီးမှနျးမသိဘူး လူလညျးအရမျးမောလာ တယျ သူ့လကျတှကေ ကြှနမရငဘကျပျေါရောကျလာပွီးဆုပျနယျနတေယျ အိုးကောငျးလိုတာ ကြှနျမပိပိထဲက အရညျတှတေောငျ စိမျ့လာတယျ သူ့လကျက တဖွညျးဖွညျးဘလာစီယာ အောကျရောကျလာပွီး နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို ပှတျခလြောတယျ ခုထိကှနျ မ အိမျမကျမကျနသေလိုပဲ ရုနျးဖို့လညျးအားမဂှိသလို ရုနျးလညျးမရုနျးခငျြဘူး နောကျဘာတှထေပျဖွဈလာမလဲပဲသိခငျြနမေိတယျ
သူ့လကျတှကေ ခုတော့ စကကျအောကျကနနေိုကျပွီးပငျတီအပျေါကနေ ကြှနျမအစလေ့ေးကိုပှတျခနြေတော အိုးကြှနျမ ဓါတျလိုကျ သလိုခံစားနရေတယျ စိတျထဲကလညျးတဈခုခုကိုတောငျးတနသေလိုပဲ ဒါကိုသူလညျးသိပုံရတယျ သူ့စတိုငျပနျ ဘောငျးဘီမှာလညျး ရလေေးတှစေိုနပွေီ သူ့ လီးတောငျနတောကိုကြှနျမအတိုငျးသားမွငျနရေတယျ တဆငျးတကျလာပွီး သူ့လီးကိုအပွငျထုတျပွီး ကြှနျမလကျထဲထညျ့ပေးတယျ ပူပူနှေးနှေးလေဲး့ သူ့ဒဈထိပျဖြားမှာ အရညျကွညျလေးတှတေောငျစို့ နပွေီ သူ့လကျခလညျနဲ့ ကြှနျမ အဖုတျထဲနိုကျလိုကျတေော့ အိုကနညျးတောငျကြှနျမ အသံထှကျသှားတယျ သူ့လီးကိုလညျးတငျးနေအေောငျဆုပျလိုကျမိ တယျ လကျခလညျနဲ့တငျအားမရတော့ပဲလကျနှဈခြောငျးပူထညျ့ပွီး ကြှနျမစောကျဖုတျထဲကိုအသှငျးအထုတျလုပျပေးနတော ကောငျးလိုကျတာကြှနျမ ပွီးခငျြခငျြတောငျဖွဈလာတယျ သူ့ လီးကွီးကလညျး ပိုပွီးတငျးလာသလိုပဲ ကြှနျမလကျထဲမှာ တ ဆကျဆကျတုနျနတေယျ မောငျ ကြှနိမပွီးတော့မယျ အို မရတော့ဘူး အို ထှကျကုနျပွီ
ကြှနျမ တကိုယျလုံးတုနျတကျသှားပွီးလဟေုနျစီးလိုကျရသလိုပဲ ကြှနျမပွီးသှားတော့ သူကမကျြနှာငယျလေးနဲ့ ” ခဈြ မောငျ့ကို လညျးခဈြလို မကောငျးစခေငျြဘူလား” အို ခဈြကောငျးသလိုမောငျ့ကိုကောငျးစခေငျြတာပေါ့ ဒါဆို မောငျ့လီးကိုစုပျပေးပါလား ကြှနျမမကျြနှာလေးရဲတတျသှားတယျ “ခဈြမှမစုပျတတျတာ “ “စုပျတတျစရာမလိုပါဘူး ခဈြစုပျခငျြသလိုစုပျလေ” သူ့ဒဈလေး ကိုကြှနျမအရငျငုံလိုကျတယျ သူ့လီး ကကြှနျမပါးစပျတဈခုလုံးပွညျ့ နတေယျ လြာလေးနဲ့ဒဈကလေးကို လညျ့ပတျဆော့ပွီး လီးကွီး ကို အားရပါးရစုပျနမေိတယျ လကျကလညျးသူ့ဥလေးကိုကိုငျခငျြလာတာနဲ့ ကိုငိပွီးဆော့ကွညျတယျ သူ့ ပါးစပျက ရှုးရှုး နဲ့အသံ တှတေောငျထှကျလာတယျ “ကောငျးလိုကျတာခဈြရယျ နာနာလေးစုပျဟုတျပွီ လြာလေးနဲ့ ဒဈကလေးကိုလကျြပေး”
“အိုကောငျးလိုကျတာ” သူလကျတှကေ အားမရတော့ပဲ ကြှနမရဲ့ဆံပငျကိုဆှဲဆုပျပွီး အတငျးဖိခတြာ သူ့လီးကအာခေါငျကိုလာ ထောကျတာ ကြှနမပြို့ခငျြသလိုတောငျဖွဈသှားတယျ ခနနတေော့ အရညျပူပူ တှကေို ကြှနျမ ပါးစပျနဲ့ပွညျ့အောငျပနျးထုတျလိုကျ တာ သူကလကျနဲ့ ခေါငျးကိုဖိထားတော့ ကြှနျမလညျး မြိုခလြိုကျရတယျ အရသာက ညီစို့စုိ့လေး ” ဟူး မောငျ အရမျးကောငျး သှားတော့ မထိနျးနိုငျဘူးဖွဈသှားတယျ” “ခစြလေး မောငျ့ကို စိတျစိုးသှားလား” “သှား လူစိုး ခုမှ လုပျတုနျးကတော့လုပျပွီးတော့” သူ့လကတှကေကြှနျမ ကို တငျးတငျးကပျြကျြပျ ဖကျထားတယျ ” ခဈြမောငျစိတျမထိနျးနိုငျတော့ ဘူး””ခဈြကိုအရမျးခဈြခငျြနပွေီ” “မောငျတို့ တဈနရောရာသှားပွီးခဈြရအောငျ” “မကောငျး ဘူးထငျတယျနျော မောငျ ခဈြကွောကျတယျ” “မကွောကျပါနဲ့ခဈြရယျ ဘာမှမဖွဈဘူး” “ခဈြတိုကျခနျးကိုပဲ သှားရအောငျနျောခဈြ” “မောငျတို့အစှမျးကုနျ ခဈြရအောငျနျော” ကြှနျမ မငွငျးခငျြတော့ဘူး ကြှနျမလညျး ရငျထဲတဈခုခုလိုခငျြနတောကိုး ၁၉လမျးက နေ အကငျဘီယာ တှဝေယျပွီးကြှနျမတိုို့ကျခနျးပျေါ တကျခဲ့ကွတယျ
အခနျးထဲရောကျတာနဲ့ အထုတျတှခေပြွီး သူကြှနျမကိုအတငျးဖကျနမျးတော့တယျ လကျတှကေလညျး မနားတမျးအလုပျရှုပျနတော ကြှနျမနို့ကိုတဈဖကျကခပြွေီးတဈဖကျက ပငျတီအောကျက စောကျပတျထဲ အသှငျးအထုတျလုပျတော့တယျ ကြှနျမ လညျး အားကမြခံ သူ့ လီးကွီးကို ပှတျသပျပွီး ဂှငျးတိုကျပေးနမေိတယျ သူ့လကျတှကေ ကြှမျးကငျြစှာပဲ ကြှနျမဘလာစီယာနဲ့ ပငျတီလေး ကိုခြှတျပဈတယျ ဘလာစီယာလေးက နမေနိုငျဝနျထမျးထား တဲ့ ကြှနျမနို့၂လုံး ပွုတျကလြာတယျ နို့သီးခေါငျးလေးတှကေလညျး စိတျထနတေော့ မာတောငျနတေယျ အဖုတျကလညျး အမှေးရေးရေးလေးနဲ့ လကျတဝါးမကအောငျစူဖွိုးနတေယျ ” လှလိုကျတာ ခဈြရယျ” ပွောပွီးကြှနျမ နို့ကိုအတငျးစို့ တော့တယျ သူစို့လိုကျတော့ ပနျးနုရောငျနို့သီးလေးတှကေကော့ပွီးခြှနျထှကျလာတယျ အဖုတျထဲကလညျးယား လိုကျတာ အရတှေတေဈစိုစိုနဲ့ပေါ့
“ခဈြမောငျထညျ့လိုကျတော့မယျနျော”ကြှနျမမရငျခုနျလိုကျမောစှာနဲ့ ခေါငျးကလေးဆကျပွလိုကျတယျ သူ့လီးကွီး ကြှနျမ အဖုတျ နှုတျခမးသားတှကေို အ၇ငျပှတျစှဲနတေယျ ကောငျးလိုကျတာ ထညျ့ပါတော့လို့. ကြှနျမ စိတျထဲကအျောနေ မိတယျ လေိးထိပျဖြားနဲ့ စောကျပတျအကှဲကွောငျးလေးထဲ ထိုးထညျ့လိုကျတာ တနးမဝငျပဲ ပလှတျဆိုပွီးခြျောထှကျသှားတယျ လီးကိုသခြောကိုငျပွီးသူ နောကျတဈခေါကျကွိုးစားတော့ ဇှကျ ဆွိုပွီး ကြှနျမစောကျခေါငျးထဲ သူ့လီးဒဈဝငျလာတယျ မောငျကဆကျမသှငျးသေးပဲဒဈမွု တျရုံလေး အသှငျးအထုတျလုပျပေးပွီး တဖွညျးဖွညျးသှငျးယူနတော အောကျကခံနရေတဲ့ကြှနျမက အ၇သာထူးကိုခံစားရငျး ကြှတျကြှတိ စုပျသကျနရေတယျ သူ့လီးကကွီးတာကိုး အသှငျးအထုတျလုပျရငျးကြှနျမနို့ကို ဈု့လိုကျ ခလြေိုကျလုပျပေးနတေဲ့ မောငျက တဈခကြိအားပွငျးပွငျးနဲ့စောငျ့ခလြိုကျတာ ဖောကျ ကနညျးမွညျပွီး လူလညျးကော့ပွနျနအေောငျနာသှားတော့ အတငျး ရုနျးမိတယျ
“အား …. မောငျရယျ နာလိုကျတာ ခဈြမခံနိုငျဘူး တျောပွီ တျောပွီ မလုပျပါတော့နဲ့မောငျ ခဈြကိုခဈြရငျသနားပါနျော”ကြှနျမ ပါးစပျက ဗလုံးဗထေးပျေါဟဈနပေမေဲ့လညျး မောငျကတော့ အျောနတေဲ့ ကြှနျမနှုတျခမျးကိုစုပျနမျးလိုကျပွီးအောကျကလညျး ဖွေးဖွေးမှနျမှနျဆောငျ့နတေယျ ဆောငျ့ရငျး ကောငျးလာတော့ ကြှနျမဖငျွကွီးတှကေို ကယေ့ကော့ပွီးခံရငျး ဆောငျ့ပါဦး မောငျ၇ယျ ကောငျးလိုကျတာ မောငျလီးကွီး ကကွီးလိုကျတာ ခဈြကိုသှကျသှကျလေးဆောငျ့ နာနာဆောငျ့ပေး စောကျဖုတျ ကွီးကှဲသှားပါစေ ဆောငျ့ဆောငျ့ ပွောရငျး ကြှနျမ သူ့ပေါငျတှကေိုကုတျခွဈုပီး ပွီးသှားတယျ သူလညျး နောကျအခကျြ၂၀လော ကျဆေောငျွ့ပွီး လရညျတှကေို ပူကနညျးနအေောငျ ကြှနျမအဖုတျထဲ ပနျးထဲ့လိုကျတယျ ခန နားပွီးတော့ ညစာစားရငျး သူ့ဖုနျး ထဲကအောကားတှေ ကြှနျမကိုပွတယျ Doggy stlye တို့ ၆၉ တို့ အစုံပေါ့ ဖငျကိုလိုးနတေဲ့ video တောငျပါသေးတယျ ကွညျ့ရငျး ကြှနျမစိတျပွနျထလ၊ာတယျ
မောငျက ၆၉လုပျကွညျ့မလားခဈြ လို့ပွောပွီး ကြှနျမအဖုတျကိုသူ့မကျြနှာပျေါ ဆှဲတငျပွီး သူ့လြာကွမျးကွီးနဲ့လကျြတော့တာပဲ အစလေ့ေးကိုစုပျလိုကျ လြာနဲ့လကျြလိုကျ ပွီးတော့ စောကျပတျထဲ လြာကိုရောကျနိုငျသမြှသှငျးပွီးလြာနဲ့လိုးသလိုလုပျပေးတာ ကြှနျမကလညျး သူ့လီးကွီးကိုငုံပွီး ပါးစပျထဲရောကျနိုငျသမြှရောကျအောငျစုပျလိုကျ လြာလေးနဲ့ဒဈကလေးကိုငုံလိုကျ ဥကိုလကျြ လိုကျနဲ့ ၆၉ပုံစံနဲ့နှဈယောကျသား တျောတျောကောငျးလာကွတယျှအတတျ စမျးထှငျလှနျးတဲ့မောငျက အောကားတှထေဲကလို ကြှနျမကို မီးဖိုဆောငျဘကျပှပွေီ့း ထမငျးစားပှဲပျေါပဈတငျလိုကျတယျ ပွီးတော့ စားပှဲစှနျးဆီ ဆှဲယူပွီး ကြှနျမပေါငျ၂ခြောငျးကို မ သူ့ ပုခုံးပျေါထမျးပွီး မညာမသာ အားရပါးရဆောငျ့ပါလရေော ခံရတဲ့ကြှနျမလညျး ထိလှနျးလို့ ဖငျကွီးကို စကောဝိုငျးဝိုငျးသလို ပငျ့ လိုကျကော့လိုကျနဲ့ ခံတာပေါ့ ခဏနတေော့ စားပှဲပျေါ လကျထောကျခိုငျးပွီး ဖငျကို နောကျပဈခိုငျးတယျ
ပွီးတော့ အားရပါးရဆောငျ့တာ တ ဖှတျဖှတျ တဖုတျဖုတျ နဲ့ တဈခနျးလုံးဆူညံသှားတယျ ဆောငျ့ခကျြကထိလှနျးတော့ သားအိမျ တောငျအောငျ့လာတယျ ဒါပမေဲ့လညျး ကောငျးလိုကျတာ ကြှနျမ ဘယျလိုမ မခံနိုငျတော့ဘူး ဆောငျ့ပါမောငျ ၇ယျ သှကျသှကျ လေးဆောငျ့ပါတော့ အား ကောငျးလိုကျတာ ကောငျးလိုကျတာ ပွောပွီး ပွီးသှားတော့တယျ သူလညျးကြှနျမနို့နှဈလုံးစုံကိုငျပွီး အားပါးတရဆောငျ့ ရငျး သုတျရညျတှထှေကျကုနျပါတယျ ပွီးတော့ကြှနျမလညျးရခြေိုခငျြပွီမောငျဆိုပွီးတော့ ရခြေိုး ခနျးထဲဝငျခဲ့ တယျ မောငျကနောကျကလိုကျလာပွီး ကြှနျမခါးလေးကို တိုငျးဖကျပွီး “တူတူ ရခြေိုးခငျြလို့” “သှား တျော တျော ကဲတဲ့မောငျ” “မသှားပါဘူး” “ခဈြစောကျပကျကွီးကို ရဆေေးပေးခငျြလို့ကှာ” “မောငျမကဲနဲ့ကှာ” သူ့လကျက ကြှနျမ စောကျဖုတျလေးကိုပှတျ သပျပေးပွီး သခြောဆေးပေးတော့လညျး ကြှနျမကွညျနူးရငျး အဖုတျထဲကလိုကျ လိုကျ ပွီးယားလာပွနျ တယျ သူ လဲပဲ လီးပွနျ တောငျနတေယျ သူ့လီးကွီးက အနောကျကနေ ကြှနျမ ပေါငျကွားထဲ တိုးဝငျနပွေီး စောကျဖုတျလေးကိုပှတျဆှဲနတေယျ ပွီးတော့ ကြှနျမကိုရခြေိုးခနျးနံရံ ဆီ တှနျးကပျပွီး လကျနှဈဖကျကိုနောကျကခြုပျပွီး လိုးတော့တယျ
ရပေနျးအောကျမှာ လိုးနရေတာ စိတျထဲမှာ တစိမြိုးလေးခံစားနရေတယျ မောငျရယျ ကောငျးလိုကျတာ အို နာနာလေးလိုးပါ ခဈြ အရမျးကောငျးနပွေီ လိုးနရေငျးတနျးလနျး မောငျက မောငျ့လီးကိုဆှဲထုတျလိုကျတော့ ကြှနျမရငျထဲဟာသှားတယျ မောငျ ကှာ ကောငျးနပေါ ပွီဆို ကြှနျမ မကနြေပျတဲ့ အသံလေးနဲ့ နှုတျခမျးလေးဆူပွီးပွောမိတော့ မောငျက “ခဈြကို မွငျးစီးသငျပေးဦးမလို့” “ထခဈြပိုကောငျးအောငျလေ” ပွောပွီးမောငျကဘိုထိုငျ ပျေါ ထိုငျပွီး ကြှနျမကိုသူ့ကိုယျပျေါ ဆှဲတငျလိုကျတယျ ကြှနျမစောကျ ဖုတျဝ နဲ့ သူ့လီးကွီးကိုတပွေီ့း ထိုငျခခြိုငျးတော့ ကြှနျမမရဲ တရဲ လေးထိုငျဖို့ပွငျလိုကျတယျ ဒါကိုမောငျက ခါးသိမျသိမျလေးကနေ ဆှဲ ပီး ဆောငျ့ခလြိုကျတာ ဇှိ ကနဲနအေောငျ အသံထှကျသှားပွီး ကြှနျမဆောကျဖုတျတဈခုလုံး ကြိမျးစပျသှားတယျ “ခဈြ ရှတေို့း နောကျငငျလုပျပေး ဟုတျပွီ ပွီးရငျဖငျ ကိုဝိုကျဝိုကျပွီးပှတျ အငျး ကောငျးတယျမဟုတျလား” သူ့ပါးစပျကနေ ကြှနျမကို သငျနေ ရုံမကပဲ သူ့လကျကွီးတှကေ ကြှနျမ တငျသားတှကေို ညဈပွီး ဆောငျ့ခပြေးနတေယျ ဒီလုပျနညျးလေးကို ကြှနျမအရမျးကွိုကျသှား တယျ သူ့လီးတဈခြောငျးလုံး အဖုတျထဲဝငျလို့လားမသိဘူး ကြှနျမ ပိုအရသာရှိသလိုပဲ ကြှနျမလညျးရှတေို့း နောကျဆုတျ လုပျ လိုကျ ဖငျကွီးကိုစကောဝိုငျးလိုကျနဲ့ အရမျးကိုကောငျးလာခြိနျမှာတော့ “မောငျခစြိကို အသားနာအောငျတဈခုခုလုပျပေးကှာ ခဈြ pain ဖီလငျလေးခံစားခငျြနတေယျ”
သူလညျးခကျြခငျြး ကြှနျမ နို့တှကေိုပကျြထှကျမတတျ ငုံခဲပွီး စုပျလိုကျ ကိုကျလိုကျလုပျပေးတယျ နို့တှကေိုသူလကျကွီးနဲ့ အညို အမဲစှဲလောကျအောငျ ဖွဈညဈနတေယျ Pain ဖီလငျ လေးရလာတော့ကြှနျမ မအောငျ့နိုငျတော့ပဲ သူ့ကြောပွငျကွီးကိုလကျသဲခြှန ခြှနျတှနေဲ ကုတျဆှဲ ပွီး ပါးစပျကလညျး အို မောငျ အို မောငျရေ အဟငျ့ အဟငျ့ မောငျ ….. မောငျ….လို့မွညျတမျးပွီးပွီးသှား တော့တယျ မောငျလညျးကြှနျမ ဖီးအပွတျဝငျပွီး ပွီးသှားတဲ့ပုံကို မွငျပွီး ပွီးခငျြလာပုံရတယျ အောကျကနေ ပွနျဆောငျ့ရငျး သူ့ လီးထဲက လရညျတှကေို အားပွငျးပွငျးနဲ့ ပနျးထုတျလိုကျတယျ မောပွီး နှဈယောကျသား ခုတငျလေးပျေါ ဖကျပွီးခဏအိပျပြျောသှား တယျ ည ၁၂လောကျ မှာသူ့အိမျကဖုနျးလာတော့ မောငျပွနျသှားတယျ ကြှနျမဘေးကနှေးထှေးမူ့လေး ပြောကျကှယျသှားတယျ ဒါပမေဲ့ ကြှနျမမောမောနဲ့အိပျပြျောသှားတယျ ဘယျလောကျကဲတဲ့မောငျလညျး ဆို သူအိမျပွနျရောကျတော့ ကြှနျမဆီဖုနျးချေါလာ တယျ ခဈြအိပျပြျောနပွေီလား မောငျက ခုမှအိမျရောကျတာ ခုမှပွနျသှားတာဆိုပမေဲ့ ခဈြကိုလှမျးလို့သေ တော့မယျ
ခဈြလညျးတူ တူပါပဲမောငျရယျ ခဈြ ဟငျ ခုခဈြ အဖုတျလေးကဘယျလိုနသေေးလဲ တျောတျောမြားနာသှားလား သှား လုပျတုနျးက လုပျပွီးခု မှ ဟှနျ အဖုတျတဈခုလုံး ကြိမျးစပျနပွေီသိလားရှငျကွီးရဲ့ လူလညျးဖှတျဖှတျ ညှကျညှကျကနြေပွေီ” ခဈြ ဟငျး… မောငျမဝ သေးဘူးကှာ ဟငျ လူဆိုး အဲ့လောကျမကဲနဲ့ကှာ မောငျ့လီးကတောငျနပွေနျပွီ ခဈြနဲ့ လိုးခဲ့တာတှေ ပွနျတှေးမိတော့ သူ့အလိုလို တောငျလာတာ သှားအပိုတှေ မောငျ့ကိုတဈခုခု မလုပျပေးခငျြဘူးလား အို ဖုနျးပွောနတော ဘာလုပျပေးလို့ရဦးမှာလဲ ခဈြ ခကျြ တငျထဲဝငျခဲ့ကှာ မောငျနဲ့ ဗီဒီယို ခကျြ ရအောငျ” မောငျ တကယျတောငျနတေယျဆိုတာခဈြကိုပွခငျြလို့ လူအေးကွီး လူရိုးကွီးလို့ ထငျခဲ့တာမောငျ့ကို အ၇ငျခကျြ တုနျးက ဆကျဈအကွောငျးဘာမှမပွောပဲ ခုတော့ ဘရိတျအုပျပါဦး ဆရာလို့ တားမှရတော့မယျ ဟှနျး ပွောလညျးပွော လကျတော့ကို ဆှဲဖှငျ့ပွီး အငျတာနကျခြိတျလိုကျတယျ မောငျက တနျဂို ကနေ ဗီဒီယို ချေါလာတော့ ကိုငျ လိုကျတယျ မောငျကမောငျ့လီးကွီးတောငျနတောကိုခဈြကိုပွပွီး ခဈြနားကို bluetooth တပျလိုကျကှာ ခဈြ ခြိုခြိုလေးကို အနီးကပျပွကှာ စောကျဖုတျလေးကိုဖွဲ ပွဦး
မောငျ့ ကသူ့လီးကွီးကိုရှတေို့းနောကျငငျရငျး ကြှနျမကို တဈခုပွီးတဈခုခိုငျးနတော ဟုတျပွီခဈြလညျးကိုယျ့ဟာကိုပှတျလေ လကျတဈဖကျက နို့ကိုခနြေေ နောကျလကျတဈဖကျက အစလေ့ေးကို ပှတျ အငျးပွီးရငျ အကှဲကွောငျးလေးအတိုငျးစှဲပေး ပွီးရငျခဈြလကျညိုးလေးအဖုတျထဲနိုကျလိုကျ အို မောငျခဈြအဖုတျထဲလကျမထညျ့ရဲဘူး လကျသဲကလညျးခြှနျနတောဆိုတော့ ပွီးတော့ ခဈြကွောကျတယျ ရှကျလညျးရှကျသလိုပဲ ကိုယျ့ဟာကိုကိုငျရမှာ ခဈြကလညျးဒါ ရှကျစရာမှ မဟုတျတာ ကိုယျ့ဟာကို အာသာဖွဖေို့ လူတိုငျးဒီလိုလုပျကွတာပဲကှာ လကျသဲ ခြှနျခြှနျနဲ့ ထိုးမိမှာစိုးတယျ မောငျ ဒါဆို ခဈြဘေးနားမှာ လီးနဲ့တူတာဘာရှိလဲ ဥပမာ နှုတျခမျးနီတောငျ့လိုဟာမြိုး” မောငျ့ကို စခငျြတာနဲ့ လီးနဲ့တကယျတူတာ လား ဒါ ဆို မြာကျနှာပေါငျးတငျဖို့ဝယျထားတဲ့ သခှားသီးတော့ရှိတယျ ခဈခဈ” ဒါဆိုအဲ့ဒါသှားယူလိုကျ အိုမောငျတကယျပွောနတောလား ခဈြက စနတော သှားယူပါခဈြရယျ ဝါး သခှားသီးက မနဲမနောပါလား သှားဘာတှပွေောနမှေနျးမသိဘူး စောကျ့ဖုတျကိုဖွဲ ပွီး သခှားသီးကိုမောငျ့လီးအမှတျနဲ့ ကိုငျပွီးသှငျးကွညျ့ကှာ” ခုနကပှတျထားလို့ စောကျရညျတှေ ရှဲ နတေော့ ထိပျပိုငျးလေးလြောလြော ရူရူဝငျသှားတယျ
“ဟုတျပွီ ခဈြ မောငျလိုးပေးသလို အသှငျးအထုတျလုပျကွညျ့လိုကျ ဖွညျးဖွညျးခငျြးသှငျး ပွီးပွနျထုတျ စိတျကသခှားသီးကို မောငျ့ လီးလိုခံစား အငျး” ကြှနျမ လညျး သခှားသီးကို သူ့လီးအမှတျနဲ့ အသှငျးအထုတျလုပျနမေိတယျ ပါးစပျကလညျး အိုး …အငျး…. အဟငျ့အဟငျ့… မောငျ ဆိုပွီးအသံစုံထှကျလာ တော့ မောငျလညျး လကျတှေ သှကျလာပွီး မွနျမွနျဂှငျးတိုကျနတေယျ ဟူး ဆို ပွီးမောငျ့ လရညျတှကေ. ပနျးထှကျလာတယျ ခဈြရယျ ကောငျးလိုကျတာ ခဈြရောကောငျးလား သှားမသိဘူးကှာ သခှားသီးက မောငျ့လီးလိုပဲလား ဟားဟား မစနဲ့ကှာ မော၈ျလုပျခိုငျးလို့လုပျရတာ မောငျလီးလိုတော့ဘယျကောငျးမလဲ ကောငျမလေး အငျ တာနကျ အောကျပွီးရငျ သခှားသီးနဲ့လုပျမနနေဲ့ဦး ဟားဟား သှား သူမြားကို သူ့လိုမှတျနလေားမသိ ဟငျး တျောပွီ မောငျ ခဈြ အရမျးအိပျခငျြလာပွီ ဒါဆိုမောငျ သီခငျြးဆိုပွမယျ ခဈြလေးအိပျ တော့ကှယျ အပွာရောငျ အခဈြည… မငျးလှမျးကွညျ့လိုကျ စမျး…………………… ပွီးပါပွီ…..
ရန်ကုန် ဆေးတက္ကသိုလ် တတ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ အိမ်ကလည်းကျွန်မကို တရုတ်တန်းမှာ တိုက်ခန်းဝယ်ပေးပြီး သူတို့ချစ်သမီး လေးကိုကျောင်းထားးပေးခဲ့တယ် ရှမ်တရုတ်မလေး ကျွန်မ က ဖြူစွပ်တဲ့အသားအရေ နဲ့ . ပြေပြစ်တဲ့ခန္တာကိုယ်အချိုးအစစ် လေးရှိ နေတယ်လေ ရင်၃၆ ခါး၂၁ နဲ့ တင် ၃၈ ဆိုတော့လုံးကြီးပေါက်လှလို့ပဲပြောရမလား ကိုယ်ဟာကိုဂုဏ်ဖော်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ ပြောရဦးမယ် မိဘတွေရဲ့အုပ်ထိန်းမူမှာနေခဲ့ ရတဲ့ကျွန်မလေ လိင်ကိစ္စမပြောနဲ့ အချစ်ဆိုတာတောင်ဘာမှန်းမသိခဲ့တဲ့အပျိုစစ်လေး ပေါ့ ဒါပေမဲ့အရွယ်လေးရလာတော့ တစ်ဖက်လိင်ကို စိတ်ဝင်စားလာတတ်ပြီပေါ့ ဒီလိုနဲ့ facebook သုံးရင်း စကားပြောကောင်းတဲ့ မောင် နဲ့ online ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ယ် Online ပေါ်မှာတော့ မောင်ဟာလူလိမ်မာလေးပါ
အချစ်ကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပေမဲ့ လိင်အကြောင်းတော့တစ်ခါမှာမဟခဲ့သူပါ တစ်နေ့တော့ မောင်ကအပြင်မှာဆုံရအောင်တဲ့ အို ကျွန်မလေ မောင်နဲ့တွေ့ဖို့ ရင်တွေခုန်လိုက်တာ ညတောင်တော်တော်နဲ့အိပ်မပျော်ဘူး မနက်နိုးလာတော့ ကွန်မ ကိုယ် ကျွန်မအလှဆုံးပြင်နေမိတယ် ဒီစကတ်လေးနဲ့ဆို အရမ်းများတိုနေမလား အိုမသိတော့ပါဘူး ဘလာစီရာအနီရဲရဲလေး ကို ဂုတ်က နေကျြိုးတိုင်းလိုက်တယ် ပင်တီနီနီလေးက ကျွန်မရဲ့ ရှက်ရှက်ကျု လုံအောင်မဖုံးနိုင်ပဲ အသားဆိုင်လေးတွေအစ်ထနေတယ် ပြီး တော့ ကြိုးတစ်ချောင်း အကျီင်္ီ အဖြူလေး အပေါ်ကဝတ်လိုက်တယ် အကျီင်္ီ အဖြူအောက်မှာကျွန်မ ရဲ့ဘလာစီယာနီနီလေးထ င်းနေမှာသေချာတယ် မီနီစကက်လေးဝတ်လိုက်တယ်
ဆံပင်ဖြောင့်ဖြောင်းစင်းစင်းတွေကို ပိုနီတေးစီး ပြီး အိုင်လိုင်နာထူထူလေးချယ်သလိုက်တယ် နှုတ်ခမ်းလေးကို အနီရဲရဲလေး ဆိုး ရင်းမှန်ထဲက ကိုယ့်ပုံကိုကြည့်ပြီးကျေနပ်သွားတယ် ဟူးရင်တွေခုန်လိုက်တာ တိုက်အောက်ဆင်းလာတဲ့ ကျွန်မကို သူကြည့်နေ တာလေ ရင်တွေ တင်တွေနားမှာရစ်သီရစ်သီပေါ့ ကျွန်မသိသားပဲ လက်ကိုလာကိုင်တဲ့ သူ့လက်တွေကလည်းအေးစက်နေတယ် ကျွန်မလက်ကိုဆွဲပြီးသူ့ကားပေါ် ခေါ်သွားတယ် ကားတာလျှောက်မောင်းနေတာ ကျွန်မတို့ခုထိဘယ်ကိုဦးတည်ရမှန်းမသိ ဒါနဲ့ပဲ ကန်တော်ကြီး ထဲရောက်လာကြတယ် သူကကျွန်မကြည့်နေတာများအို ကျွန်မမျက်နှာတောင်မထားတက်ဘူး ရင်တွေကလည်းခုန် လိုက်တာ အင်္ကျီဖြူဖြူအောက်ကနေ လှုပရှားနေမှာသေချာတယ် ကားပေါ်မှာထိုင်ရင်း သူ့ပေါင်ကိုခေါင်းအုန်းရင်းအိပ်မလား ဆို တော့ ကျွန်မခေါင်းငြိမ့်ပြီး ပေါင်ပေါ်ခေါင်းလေးအုန်းလိုက်မိတယ်
လူလိမ်မာလေးလို့ထင်ထားတဲ့ကျွန်မ မှားမှန်းသိလိုက်ရတယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူမျက်နှာကကျွန်မ. မျက်နှာပေါ် အုပ်မိုးကျ လာပြီးကျွန်မနှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးကိုအတင်းစုပ်ယူ နမ်းခံလိုက်ရတယ် အိုတစ်ခါးမှမနမ်းဖူးဆဲ့ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပျက်တော့ တတ်စုပ်ရင်းသူ့လျာတွေက အတင်းကျွန်မလျာကိုရစ်ပတ်နေတယ် ရင်ထဲမှာဘယ်လို ကြီးမှန်းမသိဘူး လူလည်းအရမ်းမောလာ တယ် သူ့လက်တွေက ကျွနမရငဘက်ပေါ်ရောက်လာပြီးဆုပ်နယ်နေတယ် အိုးကောင်းလိုတာ ကျွန်မပိပိထဲက အရည်တွေတောင် စိမ့်လာတယ် သူ့လက်က တဖြည်းဖြည်းဘလာစီယာ အောက်ရောက်လာပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ပွတ်ချေလာတယ် ခုထိကွန် မ အိမ်မက်မက်နေသလိုပဲ ရုန်းဖို့လည်းအားမဂှိသလို ရုန်းလည်းမရုန်းချင်ဘူး နောက်ဘာတွေထပ်ဖြစ်လာမလဲပဲသိချင်နေမိတယ်
သူ့လက်တွေက ခုတော့ စကက်အောက်ကနေနိုက်ပြီးပင်တီအပေါ်ကနေ ကျွန်မအစေ့လေးကိုပွတ်ချေနေတာ အိုးကျွန်မ ဓါတ်လိုက် သလိုခံစားနေရတယ် စိတ်ထဲကလည်းတစ်ခုခုကိုတောင်းတနေသလိုပဲ ဒါကိုသူလည်းသိပုံရတယ် သူ့စတိုင်ပန် ဘောင်းဘီမှာလည်း ရေလေးတွေစိုနေပြီ သူ့ လီးတောင်နေတာကိုကျွန်မအတိုင်းသားမြင်နေရတယ် တဆင်းတက်လာပြီး သူ့လီးကိုအပြင်ထုတ်ပြီး ကျွန်မလက်ထဲထည့်ပေးတယ် ပူပူနွေးနွေးလေဲး့ သူ့ဒစ်ထိပ်ဖျားမှာ အရည်ကြည်လေးတွေတောင်စို့ နေပြီ သူ့လက်ခလည်နဲ့ ကျွန်မ အဖုတ်ထဲနိုက်လိုက်တော့ အိုကနည်းတောင်ကျွန်မ အသံထွက်သွားတယ် သူ့လီးကိုလည်းတင်းနေအောင်ဆုပ်လိုက်မိ တယ် လက်ခလည်နဲ့တင်အားမရတော့ပဲလက်နှစ်ချောင်းပူထည့်ပြီး ကျွန်မစောက်ဖုတ်ထဲကိုအသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးနေတာ ကောင်းလိုက်တာကျွန်မ ပြီးချင်ချင်တောင်ဖြစ်လာတယ် သူ့ လီးကြီးကလည်း ပိုပြီးတင်းလာသလိုပဲ ကျွန်မလက်ထဲမှာ တ ဆက်ဆက်တုန်နေတယ် မောင် ကျွနိမပြီးတော့မယ် အို မရတော့ဘူး အို ထွက်ကုန်ပြီ
ကျွန်မ တကိုယ်လုံးတုန်တက်သွားပြီးလေဟုန်စီးလိုက်ရသလိုပဲ ကျွန်မပြီးသွားတော့ သူကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ” ချစ် မောင့်ကို လည်းချစ်လို မကောင်းစေချင်ဘူလား” အို ချစ်ကောင်းသလိုမောင့်ကိုကောင်းစေချင်တာပေါ့ ဒါဆို မောင့်လီးကိုစုပ်ပေးပါလား ကျွန်မမျက်နှာလေးရဲတတ်သွားတယ် “ချစ်မှမစုပ်တတ်တာ “ “စုပ်တတ်စရာမလိုပါဘူး ချစ်စုပ်ချင်သလိုစုပ်လေ” သူ့ဒစ်လေး ကိုကျွန်မအရင်ငုံလိုက်တယ် သူ့လီး ကကျွန်မပါးစပ်တစ်ခုလုံးပြည့် နေတယ် လျာလေးနဲ့ဒစ်ကလေးကို လည့်ပတ်ဆော့ပြီး လီးကြီး ကို အားရပါးရစုပ်နေမိတယ် လက်ကလည်းသူ့ဥလေးကိုကိုင်ချင်လာတာနဲ့ ကိုငိပြီးဆော့ကြည်တယ် သူ့ ပါးစပ်က ရှုးရှုး နဲ့အသံ တွေတောင်ထွက်လာတယ် “ကောင်းလိုက်တာချစ်ရယ် နာနာလေးစုပ်ဟုတ်ပြီ လျာလေးနဲ့ ဒစ်ကလေးကိုလျက်ပေး”
“အိုကောင်းလိုက်တာ” သူလက်တွေက အားမရတော့ပဲ ကျွနမရဲ့ဆံပင်ကိုဆွဲဆုပ်ပြီး အတင်းဖိချတာ သူ့လီးကအာခေါင်ကိုလာ ထောက်တာ ကျွနမပျို့ချင်သလိုတောင်ဖြစ်သွားတယ် ခနနေတော့ အရည်ပူပူ တွေကို ကျွန်မ ပါးစပ်နဲ့ပြည့်အောင်ပန်းထုတ်လိုက် တာ သူကလက်နဲ့ ခေါင်းကိုဖိထားတော့ ကျွန်မလည်း မျိုချလိုက်ရတယ် အရသာက ညီစို့စုိ့လေး ” ဟူး မောင် အရမ်းကောင်း သွားတော့ မထိန်းနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်” “ချစလေး မောင့်ကို စိတ်စိုးသွားလား” “သွား လူစိုး ခုမှ လုပ်တုန်းကတော့လုပ်ပြီးတော့” သူ့လကတွေကကျွန်မ ကို တင်းတင်းကျပ်က်ျပ် ဖက်ထားတယ် ” ချစ်မောင်စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ ဘူး””ချစ်ကိုအရမ်းချစ်ချင်နေပြီ” “မောင်တို့ တစ်နေရာရာသွားပြီးချစ်ရအောင်” “မကောင်း ဘူးထင်တယ်နော် မောင် ချစ်ကြောက်တယ်” “မကြောက်ပါနဲ့ချစ်ရယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူး” “ချစ်တိုက်ခန်းကိုပဲ သွားရအောင်နော်ချစ်” “မောင်တို့အစွမ်းကုန် ချစ်ရအောင်နော်” ကျွန်မ မငြင်းချင်တော့ဘူး ကျွန်မလည်း ရင်ထဲတစ်ခုခုလိုချင်နေတာကိုး ၁၉လမ်းက နေ အကင်ဘီယာ တွေဝယ်ပြီးကျွန်မတိုို့က်ခန်းပေါ် တက်ခဲ့ကြတယ်
အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ အထုတ်တွေချပြီး သူကျွန်မကိုအတင်းဖက်နမ်းတော့တယ် လက်တွေကလည်း မနားတမ်းအလုပ်ရှုပ်နေတာ ကျွန်မနို့ကိုတစ်ဖက်ကချေပြီးတစ်ဖက်က ပင်တီအောက်က စောက်ပတ်ထဲ အသွင်းအထုတ်လုပ်တော့တယ် ကျွန်မ လည်း အားကျမခံ သူ့ လီးကြီးကို ပွတ်သပ်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးနေမိတယ် သူ့လက်တွေက ကျွမ်းကျင်စွာပဲ ကျွန်မဘလာစီယာနဲ့ ပင်တီလေး ကိုချွတ်ပစ်တယ် ဘလာစီယာလေးက နေမနိုင်ဝန်ထမ်းထား တဲ့ ကျွန်မနို့၂လုံး ပြုတ်ကျလာတယ် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကလည်း စိတ်ထနေတော့ မာတောင်နေတယ် အဖုတ်ကလည်း အမွေးရေးရေးလေးနဲ့ လက်တဝါးမကအောင်စူဖြိုးနေတယ် ” လှလိုက်တာ ချစ်ရယ်” ပြောပြီးကျွန်မ နို့ကိုအတင်းစို့ တော့တယ် သူစို့လိုက်တော့ ပန်းနုရောင်နို့သီးလေးတွေကကော့ပြီးချွန်ထွက်လာတယ် အဖုတ်ထဲကလည်းယား လိုက်တာ အရေတွေတစ်စိုစိုနဲ့ပေါ့
“ချစ်မောင်ထည့်လိုက်တော့မယ်နော်”ကျွန်မမရင်ခုန်လိုက်မောစွာနဲ့ ခေါင်းကလေးဆက်ပြလိုက်တယ် သူ့လီးကြီး ကျွန်မ အဖုတ် နှုတ်ခမးသားတွေကို အရင်ပွတ်စွဲနေတယ် ကောင်းလိုက်တာ ထည့်ပါတော့လို့. ကျွန်မ စိတ်ထဲကအော်နေ မိတယ် လေိးထိပ်ဖျားနဲ့ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးထဲ ထိုးထည့်လိုက်တာ တနးမဝင်ပဲ ပလွတ်ဆိုပြီးချော်ထွက်သွားတယ် လီးကိုသေချာကိုင်ပြီးသူ နောက်တစ်ခေါက်ကြိုးစားတော့ ဇွက် ဆိုပြီး ကျွန်မစောက်ခေါင်းထဲ သူ့လီးဒစ်ဝင်လာတယ် မောင်ကဆက်မသွင်းသေးပဲဒစ်မြု တ်ရုံလေး အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးပြီး တဖြည်းဖြည်းသွင်းယူနေတာ အောက်ကခံနေရတဲ့ကျွန်မက အ၇သာထူးကိုခံစားရင်း ကျွတ်ကျွတိ စုပ်သက်နေရတယ် သူ့လီးကကြီးတာကိုး အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်းကျွန်မနို့ကို စ်ု့လိုက် ချေလိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ မောင်က တစ်ချကိအားပြင်းပြင်းနဲ့စောင့်ချလိုက်တာ ဖောက် ကနည်းမြည်ပြီး လူလည်းကော့ပြန်နေအောင်နာသွားတော့ အတင်း ရုန်းမိတယ်
“အား …. မောင်ရယ် နာလိုက်တာ ချစ်မခံနိုင်ဘူး တော်ပြီ တော်ပြီ မလုပ်ပါတော့နဲ့မောင် ချစ်ကိုချစ်ရင်သနားပါနော်”ကျွန်မ ပါးစပ်က ဗလုံးဗထေးပေါ်ဟစ်နေပေမဲ့လည်း မောင်ကတော့ အော်နေတဲ့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းလိုက်ပြီးအောက်ကလည်း ဖြေးဖြေးမှန်မှန်ဆောင့်နေတယ် ဆောင့်ရင်း ကောင်းလာတော့ ကျွန်မဖင်ကြီးတွေကို ကေယ့ကော့ပြီးခံရင်း ဆောင့်ပါဦး မောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ မောင်လီးကြီး ကကြီးလိုက်တာ ချစ်ကိုသွက်သွက်လေးဆောင့် နာနာဆောင့်ပေး စောက်ဖုတ် ကြီးကွဲသွားပါစေ ဆောင့်ဆောင့် ပြောရင်း ကျွန်မ သူ့ပေါင်တွေကိုကုတ်ခြစ်ုပီး ပြီးသွားတယ် သူလည်း နောက်အချက်၂၀လော က်ဆောင့်ပြီး လရည်တွေကို ပူကနည်းနေအောင် ကျွန်မအဖုတ်ထဲ ပန်းထဲ့လိုက်တယ် ခန နားပြီးတော့ ညစာစားရင်း သူ့ဖုန်း ထဲကအောကားတွေ ကျွန်မကိုပြတယ် Doggy stlye တို့ ၆၉ တို့ အစုံပေါ့ ဖင်ကိုလိုးနေတဲ့ video တောင်ပါသေးတယ် ကြည့်ရင်း ကျွန်မစိတ်ပြန်ထလ၊ာတယ်
မောင်က ၆၉လုပ်ကြည့်မလားချစ် လို့ပြောပြီး ကျွန်မအဖုတ်ကိုသူ့မျက်နှာပေါ် ဆွဲတင်ပြီး သူ့လျာကြမ်းကြီးနဲ့လျက်တော့တာပဲ အစေ့လေးကိုစုပ်လိုက် လျာနဲ့လျက်လိုက် ပြီးတော့ စောက်ပတ်ထဲ လျာကိုရောက်နိုင်သမျှသွင်းပြီးလျာနဲ့လိုးသလိုလုပ်ပေးတာ ကျွန်မကလည်း သူ့လီးကြီးကိုငုံပြီး ပါးစပ်ထဲရောက်နိုင်သမျှရောက်အောင်စုပ်လိုက် လျာလေးနဲ့ဒစ်ကလေးကိုငုံလိုက် ဥကိုလျက် လိုက်နဲ့ ၆၉ပုံစံနဲ့နှစ်ယောက်သား တော်တော်ကောင်းလာကြတယ်ွှအတတ် စမ်းထွင်လွန်းတဲ့မောင်က အောကားတွေထဲကလို ကျွန်မကို မီးဖိုဆောင်ဘက်ပွေ့ပြီး ထမင်းစားပွဲပေါ်ပစ်တင်လိုက်တယ် ပြီးတော့ စားပွဲစွန်းဆီ ဆွဲယူပြီး ကျွန်မပေါင်၂ချောင်းကို မ သူ့ ပုခုံးပေါ်ထမ်းပြီး မညာမသာ အားရပါးရဆောင့်ပါလေရော ခံရတဲ့ကျွန်မလည်း ထိလွန်းလို့ ဖင်ကြီးကို စကောဝိုင်းဝိုင်းသလို ပင့် လိုက်ကော့လိုက်နဲ့ ခံတာပေါ့ ခဏနေတော့ စားပွဲပေါ် လက်ထောက်ခိုင်းပြီး ဖင်ကို နောက်ပစ်ခိုင်းတယ်
ပြီးတော့ အားရပါးရဆောင့်တာ တ ဖွတ်ဖွတ် တဖုတ်ဖုတ် နဲ့ တစ်ခန်းလုံးဆူညံသွားတယ် ဆောင့်ချက်ကထိလွန်းတော့ သားအိမ် တောင်အောင့်လာတယ် ဒါပေမဲ့လည်း ကောင်းလိုက်တာ ကျွန်မ ဘယ်လိုမ မခံနိုင်တော့ဘူး ဆောင့်ပါမောင် ရယ် သွက်သွက် လေးဆောင့်ပါတော့ အား ကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာ ပြောပြီး ပြီးသွားတော့တယ် သူလည်းကျွန်မနို့နှစ်လုံးစုံကိုင်ပြီး အားပါးတရဆောင့် ရင်း သုတ်ရည်တွေထွက်ကုန်ပါတယ် ပြီးတော့ကျွန်မလည်းရေချိုချင်ပြီမောင်ဆိုပြီးတော့ ရေချိုး ခန်းထဲဝင်ခဲ့ တယ် မောင်ကနောက်ကလိုက်လာပြီး ကျွန်မခါးလေးကို တိုင်းဖက်ပြီး “တူတူ ရေချိုးချင်လို့” “သွား တော် တော် ကဲတဲ့မောင်” “မသွားပါဘူး” “ချစ်စောက်ပက်ကြီးကို ရေဆေးပေးချင်လို့ကွာ” “မောင်မကဲနဲ့ကွာ” သူ့လက်က ကျွန်မ စောက်ဖုတ်လေးကိုပွတ် သပ်ပေးပြီး သေချာဆေးပေးတော့လည်း ကျွန်မကြည်နူးရင်း အဖုတ်ထဲကလိုက် လိုက် ပြီးယားလာပြန် တယ် သူ လဲပဲ လီးပြန် တောင်နေတယ် သူ့လီးကြီးက အနောက်ကနေ ကျွန်မ ပေါင်ကြားထဲ တိုးဝင်နေပြီး စောက်ဖုတ်လေးကိုပွတ်ဆွဲနေတယ် ပြီးတော့ ကျွန်မကိုရေချိုးခန်းနံရံ ဆီ တွန်းကပ်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ကချုပ်ပြီး လိုးတော့တယ်
ရေပန်းအောက်မှာ လိုးနေရတာ စိတ်ထဲမှာ တစိမျိုးလေးခံစားနေရတယ် မောင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ အို နာနာလေးလိုးပါ ချစ် အရမ်းကောင်းနေပြီ လိုးနေရင်းတန်းလန်း မောင်က မောင့်လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ကျွန်မရင်ထဲဟာသွားတယ် မောင် ကွာ ကောင်းနေပါ ပြီဆို ကျွန်မ မကျေနပ်တဲ့ အသံလေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးဆူပြီးပြောမိတော့ မောင်က “ချစ်ကို မြင်းစီးသင်ပေးဦးမလို့” “ထချစ်ပိုကောင်းအောင်လေ” ပြောပြီးမောင်ကဘိုထိုင် ပေါ် ထိုင်ပြီး ကျွန်မကိုသူ့ကိုယ်ပေါ် ဆွဲတင်လိုက်တယ် ကျွန်မစောက် ဖုတ်ဝ နဲ့ သူ့လီးကြီးကိုတေ့ပြီး ထိုင်ချခိုင်းတော့ ကျွန်မမရဲ တရဲ လေးထိုင်ဖို့ပြင်လိုက်တယ် ဒါကိုမောင်က ခါးသိမ်သိမ်လေးကနေ ဆွဲ ပီး ဆောင့်ချလိုက်တာ ဇွိ ကနဲနေအောင် အသံထွက်သွားပြီး ကျွန်မဆောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံး ကျိမ်းစပ်သွားတယ် “ချစ် ရှေ့တိုး နောက်ငင်လုပ်ပေး ဟုတ်ပြီ ပြီးရင်ဖင် ကိုဝိုက်ဝိုက်ပြီးပွတ် အင်း ကောင်းတယ်မဟုတ်လား” သူ့ပါးစပ်ကနေ ကျွန်မကို သင်နေ ရုံမကပဲ သူ့လက်ကြီးတွေက ကျွန်မ တင်သားတွေကို ညစ်ပြီး ဆောင့်ချပေးနေတယ် ဒီလုပ်နည်းလေးကို ကျွန်မအရမ်းကြိုက်သွား တယ် သူ့လီးတစ်ချောင်းလုံး အဖုတ်ထဲဝင်လို့လားမသိဘူး ကျွန်မ ပိုအရသာရှိသလိုပဲ ကျွန်မလည်းရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် လုပ် လိုက် ဖင်ကြီးကိုစကောဝိုင်းလိုက်နဲ့ အရမ်းကိုကောင်းလာချိန်မှာတော့ “မောင်ချစိကို အသားနာအောင်တစ်ခုခုလုပ်ပေးကွာ ချစ် pain ဖီလင်လေးခံစားချင်နေတယ်”
သူလည်းချက်ချင်း ကျွန်မ နို့တွေကိုပျက်ထွက်မတတ် ငုံခဲပြီး စုပ်လိုက် ကိုက်လိုက်လုပ်ပေးတယ် နို့တွေကိုသူလက်ကြီးနဲ့ အညို အမဲစွဲလောက်အောင် ဖြစ်ညစ်နေတယ် Pain ဖီလင် လေးရလာတော့ကျွန်မ မအောင့်နိုင်တော့ပဲ သူ့ကျောပြင်ကြီးကိုလက်သဲချွန ချွန်တွေနဲ ကုတ်ဆွဲ ပြီး ပါးစပ်ကလည်း အို မောင် အို မောင်ရေ အဟင့် အဟင့် မောင် ….. မောင်….လို့မြည်တမ်းပြီးပြီးသွား တော့တယ် မောင်လည်းကျွန်မ ဖီးအပြတ်ဝင်ပြီး ပြီးသွားတဲ့ပုံကို မြင်ပြီး ပြီးချင်လာပုံရတယ် အောက်ကနေ ပြန်ဆောင့်ရင်း သူ့ လီးထဲက လရည်တွေကို အားပြင်းပြင်းနဲ့ ပန်းထုတ်လိုက်တယ် မောပြီး နှစ်ယောက်သား ခုတင်လေးပေါ် ဖက်ပြီးခဏအိပ်ပျော်သွား တယ် ည ၁၂လောက် မှာသူ့အိမ်ကဖုန်းလာတော့ မောင်ပြန်သွားတယ် ကျွန်မဘေးကနွေးထွေးမူ့လေး ပျောက်ကွယ်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်မမောမောနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ် ဘယ်လောက်ကဲတဲ့မောင်လည်း ဆို သူအိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်မဆီဖုန်းခေါ်လာ တယ် ချစ်အိပ်ပျော်နေပြီလား မောင်က ခုမှအိမ်ရောက်တာ ခုမှပြန်သွားတာဆိုပေမဲ့ ချစ်ကိုလွမ်းလို့သေ တော့မယ်
ချစ်လည်းတူ တူပါပဲမောင်ရယ် ချစ် ဟင် ခုချစ် အဖုတ်လေးကဘယ်လိုနေသေးလဲ တော်တော်များနာသွားလား သွား လုပ်တုန်းက လုပ်ပြီးခု မှ ဟွန် အဖုတ်တစ်ခုလုံး ကျိမ်းစပ်နေပြီသိလားရှင်ကြီးရဲ့ လူလည်းဖွတ်ဖွတ် ညှက်ညှက်ကျေနေပြီ” ချစ် ဟင်း… မောင်မဝ သေးဘူးကွာ ဟင် လူဆိုး အဲ့လောက်မကဲနဲ့ကွာ မောင့်လီးကတောင်နေပြန်ပြီ ချစ်နဲ့ လိုးခဲ့တာတွေ ပြန်တွေးမိတော့ သူ့အလိုလို တောင်လာတာ သွားအပိုတွေ မောင့်ကိုတစ်ခုခု မလုပ်ပေးချင်ဘူးလား အို ဖုန်းပြောနေတာ ဘာလုပ်ပေးလို့ရဦးမှာလဲ ချစ် ချက် တင်ထဲဝင်ခဲ့ကွာ မောင်နဲ့ ဗီဒီယို ချက် ရအောင်” မောင် တကယ်တောင်နေတယ်ဆိုတာချစ်ကိုပြချင်လို့ လူအေးကြီး လူရိုးကြီးလို့ ထင်ခဲ့တာမောင့်ကို အရင်ချက် တုန်းက ဆက်စ်အကြောင်းဘာမှမပြောပဲ ခုတော့ ဘရိတ်အုပ်ပါဦး ဆရာလို့ တားမှရတော့မယ် ဟွန်း ပြောလည်းပြော လက်တော့ကို ဆွဲဖွင့်ပြီး အင်တာနက်ချိတ်လိုက်တယ် မောင်က တန်ဂို ကနေ ဗီဒီယို ခေါ်လာတော့ ကိုင် လိုက်တယ် မောင်ကမောင့်လီးကြီးတောင်နေတာကိုချစ်ကိုပြပြီး ချစ်နားကို bluetooth တပ်လိုက်ကွာ ချစ် ချိုချိုလေးကို အနီးကပ်ပြကွာ စောက်ဖုတ်လေးကိုဖြဲ ပြဦး
မောင့် ကသူ့လီးကြီးကိုရှေ့တိုးနောက်ငင်ရင်း ကျွန်မကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုခိုင်းနေတာ ဟုတ်ပြီချစ်လည်းကိုယ့်ဟာကိုပွတ်လေ လက်တစ်ဖက်က နို့ကိုချေနေ နောက်လက်တစ်ဖက်က အစေ့လေးကို ပွတ် အင်းပြီးရင် အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်းစွဲပေး ပြီးရင်ချစ်လက်ညိုးလေးအဖုတ်ထဲနိုက်လိုက် အို မောင်ချစ်အဖုတ်ထဲလက်မထည့်ရဲဘူး လက်သဲကလည်းချွန်နေတာဆိုတော့ ပြီးတော့ ချစ်ကြောက်တယ် ရှက်လည်းရှက်သလိုပဲ ကိုယ့်ဟာကိုကိုင်ရမှာ ချစ်ကလည်းဒါ ရှက်စရာမှ မဟုတ်တာ ကိုယ့်ဟာကို အာသာဖြေဖို့ လူတိုင်းဒီလိုလုပ်ကြတာပဲကွာ လက်သဲ ချွန်ချွန်နဲ့ ထိုးမိမှာစိုးတယ် မောင် ဒါဆို ချစ်ဘေးနားမှာ လီးနဲ့တူတာဘာရှိလဲ ဥပမာ နှုတ်ခမ်းနီတောင့်လိုဟာမျိုး” မောင့်ကို စချင်တာနဲ့ လီးနဲ့တကယ်တူတာ လား ဒါ ဆို မျာက်နှာပေါင်းတင်ဖို့ဝယ်ထားတဲ့ သခွားသီးတော့ရှိတယ် ခစ်ခစ်” ဒါဆိုအဲ့ဒါသွားယူလိုက် အိုမောင်တကယ်ပြောနေတာလား ချစ်က စနေတာ သွားယူပါချစ်ရယ် ဝါး သခွားသီးက မနဲမနောပါလား သွားဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး စောက့်ဖုတ်ကိုဖြဲ ပြီး သခွားသီးကိုမောင့်လီးအမှတ်နဲ့ ကိုင်ပြီးသွင်းကြည့်ကွာ” ခုနကပွတ်ထားလို့ စောက်ရည်တွေ ရွဲ နေတော့ ထိပ်ပိုင်းလေးလျောလျော ရူရူဝင်သွားတယ်
“ဟုတ်ပြီ ချစ် မောင်လိုးပေးသလို အသွင်းအထုတ်လုပ်ကြည့်လိုက် ဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်း ပြီးပြန်ထုတ် စိတ်ကသခွားသီးကို မောင့် လီးလိုခံစား အင်း” ကျွန်မ လည်း သခွားသီးကို သူ့လီးအမှတ်နဲ့ အသွင်းအထုတ်လုပ်နေမိတယ် ပါးစပ်ကလည်း အိုး …အင်း…. အဟင့်အဟင့်… မောင် ဆိုပြီးအသံစုံထွက်လာ တော့ မောင်လည်း လက်တွေ သွက်လာပြီး မြန်မြန်ဂွင်းတိုက်နေတယ် ဟူး ဆို ပြီးမောင့် လရည်တွေက. ပန်းထွက်လာတယ် ချစ်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ ချစ်ရောကောင်းလား သွားမသိဘူးကွာ သခွားသီးက မောင့်လီးလိုပဲလား ဟားဟား မစနဲ့ကွာ မော၈်လုပ်ခိုင်းလို့လုပ်ရတာ မောင်လီးလိုတော့ဘယ်ကောင်းမလဲ ကောင်မလေး အင် တာနက် အောက်ပြီးရင် သခွားသီးနဲ့လုပ်မနေနဲ့ဦး ဟားဟား သွား သူများကို သူ့လိုမှတ်နေလားမသိ ဟင်း တော်ပြီ မောင် ချစ် အရမ်းအိပ်ချင်လာပြီ ဒါဆိုမောင် သီချင်းဆိုပြမယ် ချစ်လေးအိပ် တော့ကွယ် အပြာရောင် အချစ်ည… မင်းလှမ်းကြည့်လိုက် စမ်း…………………… ပြီးပါပြီ…..
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ခဈြရသော မောငျ